नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : फेरी एघार बर्सिय बालिकालाई बलात्कार गरी जिउँदै जलाएर मारिएको हृदय बिदारक घटना सार्वजनिक !
फेरी एघार बर्सिय बालिकालाई बलात्कार गरी जिउँदै जलाएर मारिएको हृदय बिदारक घटना सार्वजनिक !
देशमा के भैरहेको छ हँ ??!!
निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्ड पछि नेपालमा कयौँ बलात्कारकाण्ड भए तर सरकारले अपराधी समाएको कार्वाही गरेको समाचार आऊला भन्दा उल्टो बलात्कार र हत्याका घटना बढ्दै जानुले सर्बत्र चिन्ता छाएको छ । फेरी हरिहरपुर (धनुषा) मा एक एघार बर्सिय बालिकालाई बलात्कार गरी जिउँदै जलाएर मारिएको हृदय बिदारक घटना सार्वजनिक भएको छ ।
गत बिहीबार बलात्कारपछि जलाएर हत्या गरिएकी ११ वर्षकी रेशमा देवनारायण रसाइलीकी एक्ली सन्तान थिइन् । त्यो घटनापछि पुरै हरिहरपुर स्तब्ध छ । त्यो अपराध गरेका निरज जर्घामगर पक्राउ परेपनि हरिहरपुर स्तब्ध र
त्रसित छ ।
उनी बोल्न सक्तैनन् । रुनलाई उनको आशु निखि्रसकेको छ । उनी निरन्तर एकै ठाउँमा बसेर टोलाइरहन्छन् ।
सबैकी प्यारी रेशमा गाउँकै विद्यालयमा कक्षा २ मा पुगेकी चञ्चल रेशमा हंसमुख स्वभावका कारण गाउँमा सबैको प्यारी थिइन् । उनी पढाईमा पनि एकदमै राम्रो रहेको माइलो बुवा पदमचन्द्र रसाईली बताउँछन् ।
अपराधको शिकार भएको दिन पनि रेशमा गाउँकै इन्द्र बुर्जा मगरको छोरीको विवाहमा बजिरहेको गीतमा रमाइरहेकी थिइन् । उनका बाबा र काकाहरु भन्दा अगाडि उनी पुगेकी थिइन् । संगै बिहेभोज खाएर अविभावकहरु घर फर्के, उनी नाच्न त्यही बसिन् । अनलाइन खबरका अनुसार भोलि बिहान उनको जलेको शव घर नजिकैको उखुबारीमा फेला परेको थियो ।